उपचारमा सबै सम्पत्ति सकिएपछि मन्दिरको बास ! यस्तो छ बुढाबुढीको अवस्था (स्थलगत रिपोर्ट) - Samachar PatiSamachar Pati
उपचारमा सबै सम्पत्ति सकिएपछि मन्दिरको बास ! यस्तो छ बुढाबुढीको अवस्था (स्थलगत रिपोर्ट)
पोखरा, २९ माघ । क्यान्सरको उपचार गर्दागर्दै घरखेत लिलाम भएपछि मन्दिरमा बस्दै आएका पर्वतको पाङराङका पदम बहादुर कँडेल दम्पतिलाई पत्रकार प्रल्हाद चन्द्र घिमिरेले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । पत्रकार घिमिरेले जन्मदिनको अवसर पारेर कँडेल दम्पतीलाई नगद ५ हजार सहयोग गरेका हुन् ।
जन्मदिनमा कतै सहयोग गर्नुपर्ला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, त्यसै क्रममा पदमबहादुर बुबाको बारेमा जानकारी पाँए, घिमिरेले भने – क्यान्सरको उपचार गर्दा घरखेत लिलाम भएर उपचारमा समस्या भएको र मन्दीरमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेछ साहै्र दुख लाग्यो ।
६७ वर्षिय कँडेल सहयोग पाए अझै बाँच्न सक्ने बताउछन् । पुजारी काम गर्दै आएका कँडेल रोग लागेपछि पुजा आजा गर्न नसक्ने भएका छन् । पिसाब चुहिरहन्छ जुठो पिठो भएरर के भगवानको छेउमा जानु, आजकाल पुजा गर्न सकेको छैन, पदमबहादुरले भने – सम्पतिपनि सकियो, जिवनभर पुजारी भएर काम गरेँ त्यसैले मरे पनि शिवकै मन्दीरमा प्राण जाओस भनेर यहाँ आएर बसेको हुँ । हेर्नुहोस भिडियो
पोखरालाई खेलकुदको शहर बनाउन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा
बाम गठबन्धन बाहेक अर्को कुनै गठबन्धन लोकतान्त्रिक छैन – रबिन्द्र अधिकारी
भाइरल भिम बहादुर बिक ! सबैलाई हसाउने भिमको आफ्नै दुखेसो !!
नगरपालिका भित्र रहेका २७ विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरिदिने
नौ हजार परिवारलाई योजना सञ्चालन
आलेख :- दशावतार बालन जोगाउँदै रामपुरवासी
शहीद स्मारक फुटबल ! चौथो चरणको पहिलो खेलमा टुसाल युथ क्लब विजयी
पोखरा म्याराथनको उपाधि हरिकुमार रिमाललाई